mairie-antananarivo – Boriboritany voalohany: Fanadiovana teny Isotry sy ny manodidina
Boriboritany voalohany: Fanadiovana teny Isotry sy ny manodidina
auteur 14 jolay 2017 Commentaires fermés
Nanomboka teny amin’ny Petite Vitesse ny asa, nandalo an’ Isotry ary nifarana teny Ampefiloha. Araka ny nambaran’ny lefitra Voalohan’ny lehiben’ny Boriboritany Andriamatoa RAFANOMEZANTSOA Mamy Nirina dia tokony hifanentana sy hifampitaiza ary hifanaja hatrany isika mba tsy hisian’ny fampiarana ny lalàna izay miteraka fanasaziana.
Nanamafy hatrany izy fa tsy hijanona hatreo ny ezaka fanadiovana fa hitohy manerana ireo faritra hafa. Mpivarotra an-jatony teo ho eo no nesorina sy nentanina mba hamonjy ireo tsena ara-dalàna raha tsy izay dia manenjika ny tsenan’Isotry isaky ny Asabotsy. Hisy koa ny fepetra hentitra izay ho raisina ho an’ireo izay minia tsy manaraka ny fandaminana.
Tanàna iaraha-manana Antananarivo ka tokony samy handray ny andraikitra sahaza azy ny tsirairay.